Ebook ole ka ị nwere na eReader gị? | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Ebook ole ka ị nwere na eReader gị?
Joaquin Garcia | | eBooks
Oge okpomọkụ na-abịa yana ya ezigbo ihu igwe na ezumike. Obere oge ebe otutu ndi mmadu jiri ohere wepu eBook eRead ma gụọ n’oge obula, mana Ebook ole ka ha dị? Hà dị ọtụtụ ka ha dị ole na ole?
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya onye ọ bụla lekwasịrị anya n'ike nke eReader, ihuenyo ya ma ọ bụ batrị ya mana Na gị ohere? Ọ nwere onye ọ bụla hụrụ ebe nchekwa gị? Onwere onye guru akwukwo a nwere ike itinye n'ime eReader?Eziokwu bụ na ọ dị ka ọ bụ naanị ụlọ ọrụ na-eche banyere ya naanị ịchekwa narị dollar ole na ole. Afọ ole na ole gara aga, ọ dị ka ndị niile eReaders ga-enwe oghere kaadị iji tinye ọtụtụ ebook dị ka anyị chọrọ, mana omume ugbu a bụ iwepu nke a ma pụọ oghere dị n'ime ya n'ọtụtụ ọnọdụ anaghị eru 4 Gb ma ọ dịghị onye na-eme mkpesa.
Ebe nchekwa dị n'ime akwụkwọ ntanetị na-ebuwanye obere, ọ bụ ezie na ọ na-akwado ọtụtụ puku akwụkwọ
O doro anya na na Spain, na nsogbu, sndị ọrụ ole na ole nwere ọtụtụ narị na akwụkwọ narị, ihe ezi uche dị na ya, mana na mpụga oke ala anyị, ndị ọrụ ole na ole kwuru ya. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ ndị na-atụ ụjọ etinyela "puku kwuru puku" nke ebook na Kindle ya n'ihi nke a na eReader emeela ihe ka njọ ma ọ bụ na ọ na-ekwu.
Onwe m echere na nchekwa ahụ abụghị nsogbu n'ihi sd kaadị, mana ugbu a, ndị na-agụ akwụkwọ enweghị oghere ahụ, ma ọ dịkarịa ala ọtụtụ n'ime ha, yabụ o yiri ka anyị ga-eji inwe akwụkwọ ole na ole ma ọ bụ fechaa ebooks, isi ihe na-adọrọ mmasị nke mmadụ ole na ole na-ege ntị ma na m chere na ọ bụ isi ihe niile, ị naghị eche?
Ma ugbu a, m na-enyefe gị bọl ahụ Ebook ole ka ị nwere na eReaders gị? You na-ehichapụ ebook na onye na-agụ gị mgbe ị na-agụ ha? Nwetụla mgbe ị mejupụtara ebe nchekwa nke ngwaọrụ gị? Ì chere na eReader na-akawanye njọ mgbe ọ jupụtara? Kedu ihe ị chere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » software » eBooks » Ebook ole ka ị nwere na eReader gị?
Enwere m akwụkwọ ntanetị 49 na mpempe ọkụ m. Ọ bụrụ na achọrọ m ịnara ọtụtụ ihe mana ọ bụrụ na anaghị m eme ya, ọ bụ maka ebumnuche abụọ:
1- Obiọma na-akwụsịlata ọtụtụ akwụkwọ ị nwere. Echere m na ọ bụ n'ihi usoro nchekwa nke onye na-agụ ya. Ọ ga-amasị m ka ọ rụọ ọrụ dị ka ebe nchekwa USB ma kwe ka etinye folda na nghọta onye ọrụ dịka Papyre mere (ma ọ bụ mee). Usoro nchịkọta ihe nchịkọta na-echefu ọtụtụ akwụkwọ m nwere… Echere m. Ọ bụrụ na m mejọrọ, gwa m.
2- Achọghị m inwe mgbagwoju anya mgbe m gụrụ akwụkwọ. Ọ ga-abụ mkpuchi ma ọ bụrụ na Kindle na-enye gị ohere ịka akara akwụkwọ dịka a na-agụ ya ma debe ya na folda ma ọ bụ nchịkọta akpọrọ: "gụọ." Otu ihe iji melite n’ọdịnihu.
Ndewonu! Enwere m akwụkwọ 850 na m 4 na ọ na-ebelata mgbe m na-ebu akwụkwọ niile ka ọ na-egosi ha, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Agụrụ m nkezi nke akwụkwọ 50 kwa afọ n'ihi ya enwere m oge! Ha ha
Enwere m ihe dị ka akwụkwọ 800, mana na ọkụ m na-agafe ndị m na-agụ na ụfọdụ ndị ọzọ, n'etiti akwụkwọ 10 na 20, ndị ọzọ m na-ejikwa ya, mgbe m zụrụ onye na-agụ akwụkwọ anaghị edozi na ebe nchekwa, ọ dị ka adịghị mkpa
echiche efu nke geek dijo
Enwere m ihe dịka 1000 na ọkụ m. Na mbido m tinyere ha na mberede, achọpụtara m na ọ na-ebelata oge. Ọ ga-abụrịrị na e depụtara ụfọdụ na-ezighi ezi. Ọ bụrụ na ịtinye ha obere nke nta, ọ na-arụ ọrụ ọfụma n’agbanyeghị ole ị tinyere na ego ole.Ebido na 1200 ma ọ bụ karịa, amalitere m ibelata nwayọ ntakịrị, mana ọ dịghị ihe dị njọ.
Na-aza echiche efu nke geek
Ọ na - eme m dịka ọ dị na mp3s, ekwesighi m ịnwe ọtụtụ egwu ma ọ bụ nchịkọta akwụkwọ nke m na - agaghị eji. N’ihi ya, m na-azụ ihe ole na ole. M ga-eme karịa akwụkwọ ndị na-adịghị na ebook !!!, nke m ga-achọ ịkpọtụrụ n'ụzọ dị mfe na ụzọ ụgbọ oloko ma ọ bụ n'okporo ámá na m iPad ma ọ bụ iPhone, ebe ọ bụ na m na-edebe epubs na dropbox ma ọ bụ mega; ihe nkem dikwara iji akwukwo ozo eme ihe (nke mechiri na nyiwe nke ha). Ma eleghị anya, otu ụbọchị a ga-enwe nnwere onwe nke a ma eleghị anya na usoro ọkọlọtọ ...
Zaghachi Daniel Carreras Lana
gburugburu ụwa dijo
Ugbu a enwere m 35, nke m na-agụ 4, mgbe m gwụchara otu, nke na-eme karịa ma ọ bụ obere otu izu, m na-ehichapụ ya.
Enwere m ebook m niile na PC m, ebe m na-achịkwa ha site na Caliber. Na ngwaọrụ m ga-enwe gburugburu 30-40 ebooks na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ndị m na-agụ M na-ewepụ na mgbe m chọrọ itinye ọdịnaya m na-ezo aka Caliber na PC, yabụ n'ozuzu m anaghị eburu ebe nchekwa dị ukwuu.
Ọzọkwa, igwe ojii ojii ọrụ na-azọpụta gị ohere.
Zaghachi Juan Sebastian Quintero Santacruz
Enwere m ihe dị ka gigs 8 nke akwụkwọ na PC m, akwagala m ole na ole na mbadamba, mana enwere m ihe dịka akwụkwọ 200 nke m bugoro na Nook m. O nweghi nsogbu, ọ naghị nwayọ nwayọ, ejubeghị ya, m na-ahazi ha n’elu shelf na ebe nchekwa. Ọ bụrụ na m chọrọ itinyekwu akwụkwọ (M ka nwere ọtụtụ ohere fọdụrụ na ereader) M gbakwunyere kaadị ebe nchekwa. Ejibeghị m ya, mana ọ bụ naanị na ọ bụrụ na.
Tolino Page, Tolino eReader ọhụrụ maka njedebe dị ala
Ngwa 3 kachasị mma ka anyị tinye ederede anyị